Azerbaijan mety ho fahombiazana lehibe amin'ny indostrian'ny fiaramanidina
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Azerbaijan mety ho fahombiazana lehibe amin'ny indostrian'ny fiaramanidina
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Heydar Aliyev any Baku dia nampiasain'ny mpandeha 1.57 tapitrisa nanomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny Mey ary io no seranam-piaramanidina lehibe indrindra any Azerbaijan. Ny isan'ny mpandeha rehetra atolotry ny seranam-piaramanidina rehetra any Azerbaijan dia 1.85 tapitrisa mandritra ny dimy volana voalohany amin'ny 2019.
Fihaonana an-tampon'ny World Air Navigation sy ny fivoriana fanao isan-taona an'ny fikambanana sivily sivily ho an'ny serivisy fitaterana an-habakabaka (CANSO) natao tany Genève tamin'ity herinandro ity dia fahombiazana lehibe ho an'ny mpitondram-pirenena nasionalin'i Azerbaijan, Azerbaijan Airlines.
Delegasiona avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, izay fantatra amin'ny anarana hoe “AZAL”, notarihin'i Farkhan Guliyev, talen'ny orinasam-pandraharahana fiaramanidina nasionaly Azeraeronavigation, no nandefa horonantsary promo iray izay nanasongadina ny zava-bitan'i AZAL sy ny drafitra ho an'ny ho avy, mihoatra ny 300 manatrika ireo matihanina amin'ny sidina.
"Azerbaijan dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanamorana ny fifamoivoizana amin'ny rivotra eran-tany sy isam-paritra ary manana fifandraisana matanjaka amin'ny fanjakana sy fikambanana maro manerantany," hoy ny Tale jeneralin'ny CANSO, Simon Hocquard, izay noresahin'i AZAL araka ny voalaza tao Genève tamin'ny Alarobia taorian'ny fandefasana ilay horonantsary.
"Araka izany dia ho toerana tena tsara ho an'ny hetsika ho an'ny mpikambana manaraka izy, ary manantena ny handray anao rehetra aho amin'ny taona 2020 hizaha ny farany amin'ny [fitantanana fifamoivoizana amin'ny rivotra]."
Ny fihaonana an-tampon'ny World Air Navigation sy CANSO dia notanterahina ny 17-19 Jona. CANSO amin'ny taona ho avy - sehatra fitantanana fitantanana fifamoivoizana an'habakabaka eran-tany izay heverina ho hetsika lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina isan-taona - dia hatao any Baku ny 8-12 Jona 2020.
Ny fivezivezin'ny sidina Azerbaijan dia tantanin'i Azeraeronavigation, fantatra amin'ny anarana hoe AZANS. Ny fikambanana no tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny sidina rehetra ao anatin'ny habakabaka Azerbaijan, izay manana velaran-tany 165,400 kilometatra toradroa (63,861 kilaometatra toradroa) ambonin'ny tany Kaokazy atsimo sy amin'ny sisiny andrefan'ny ranomasina Caspian, mipetraka eo amin'ny fihaonan'i Azia afovoany sy Eropa atsinanana.
AZANS amin'izao fotoana izao dia manompo sidina 150,000 isan-taona, 95,000 amin'ireo dia sidina fitaterana amin'ny alàlan'ny habakabaka Azerbaijan. Hatramin'ny 2002, ny fifamoivoizana an'habakabaka manerana an'i Azerbaijan dia nitombo mihoatra ny 200 isan-jato, raha ny angom-baovao navoakan'ny AZAL tamin'ny taona 2018.
Barabariana sy tsy manaja olona: nampiditra indray ny volavolan-dalàna momba ny fisaraham-panambadiana 'triple talaq' i India
Jakarta mankany Banyuwangi: Sidina bebe kokoa amin'ny Garuda Indonesia
22 minitra lasa izay